Kuunza Kwakasikwa Fekitori: Nhare dzeMapepa Dzingori Nyore Rakareruka | Martech Zone
Kuunza Kwakasikwa Fekitori: Nhare dzeMapepa Dzingori Nyore Rakareruka
Muvhuro, March 27, 2017 Chipiri, Kurume 28, 2017 Yariv Erel
Kushambadzira nharembozha kunoenderera kuve imwe yematanho ari kukura nekukurumidza zvikuru uye akaomarara ehupfumi hwepasi rose hwekutengesa. Sekureva kwesangano rekutenga-kushambadzira Magna, kushambadzira kwedhijitari kuchapfuura kushambadzira kwechinyakare kweTV gore rino (nekutenda zvakanyanya kushambadziro mbozhanhare). Na2021, kushambadzira nhare kuchave kwawedzera kusvika kumadhora mazana maviri nemakumi maviri nemashanu, kana makumi manomwe nezviviri muzana yemadhirama ekushambadzira edhijitari.
Saka mhando yako ingamira sei mune ruzha? Iine AI yakanangana nechinhu chinhu chete nzira yekubata kutarisisa kuendesa kuita kwekugadzira.
Asi vatengi kazhinji vanoona kushambadzira kwenhare kuchishandirwa nhasi sekugumbura kana kukanganisa. Chidzidzo chimwe chete cheForrester chakawana vatengi vachishuma izvozvo 73 muzana yezviziviso zvefoni inoonekwa mune rakajairika zuva kutadza kugadzira yakanaka mushandisi ruzivo. Kune vatengesi, izvi zvinoreva kuti nharembozha yavo inowanzo shomeka. Paavhareji, $ 0.55 yedhora roga roga rakashandiswa pamushandirapamwe wekushambadzira hausi kuburitsa hunhu hunobatika hwesangano.
Ndosaka takagadzira Chigadzirwa Chekugadzira ™, yekukweva-uye-kudonhedza nharembozha studio inobvumidza zvigadzirwa, vamiririri vekugadzira, vaparidzi uye makambani emakambani ezvigadzirwa zvakafanana kuti vagadzire kushambadzira kune ese mafoni nedesktop. Iyi yakasarudzika yekuzvishandira papuratifomu inosunga HTML5 kuendesa mhedzisiro-inotungamirwa kushambadzira nekukurumidza uye nemazvo pasina ruzivo rwekukodha runodiwa uye nemutengo unodhura. Kushambadzira kwega kwega kwakasiyana, kunoenderana nekukomberedza, uye zvakanyanya kukosha, kuita uye kutaura nyaya.
Ipuratifomu yakadzika seti yezvinhu uye sub-maficha anotendera ese kushambadzira kuve yakasarudzika uye mushandirapamwe wega wega kumira. Ipuratifomu inoshandisa mawidget nezviito kutsiva kukodha. Dhonza uye Kudonhedza, Ongorora pane Chigadzirwa, Matemplate, uye Vhura Canvas modhi ndizvo zvivakwa zvepuratifomu. Zvimiro zvinosanganisira: Outstream Vhidhiyo, Dynamic Zvisikwa, Nzvimbo, Mitambo & Logic, Inoteerera uye Cross Screen, uye zvimwe.
Kugadzira Fekitori inozvishandira uye iri nyore kushandisa, inosanganisira matatu makuru maitiro:
Widgets: bvisa kudiwa kwekodhi
zvinokonzera: tsanangura kana chimwe chinhu chikaitika
Action: sarudza chiitiko chinoitika.
Nekupemberera izvi zvitatu zvevakuru, chero mugadziri anogona kugadzira akaomesesa, anoteerera uye anobata HTML5 Ads.
Isu tinotenda kuti kuisa nyanzvi-giredhi yekunyora mhinduro mumawoko evashambadzi vese, makuru kana madiki, zvinobvumidza kushambadza kuve kwakanyanya kubatikana uye nekudaro kunoshanda, uye izvi zvinonyanya kukosha mune zera iro bhanhire rakapofomara uye ad blockers zvinoita kuti zviome uye zvakaoma kusvika kune vateereri zvachose.
Kuvharidzira kushambadzira idambudziko chairo kune iwo maindasitiri. Chirevo cheBI Intelligence chakawana kuti traffic traffic inoona katatu kushambadza ichivharira pasirese kupfuura desktop. Izvi zvinopa kutyisidzira kukuru kumakambani enhau edhijitari ayo anoenderana nekushambadzira kwemari. Kana kushambadzira kuri kuvharidzira nharembozha kwasvika pamazinga edesktop, makambani enhau edhijitari eU.S.anogona kurasikirwa nemari inosvika madhora zviuru gumi nezviuru mazana manomwe nezviuru pamadhizaini edhijitari gore rinouya.
Kugadzira Fekitori, chedu chizvarwa chechipiri chigadzirwa, chakaremerwa nemakore erevo kubva kune vatengi vedu uye chakagadzirirwa kuti zvese zvive nyore uye zvinyatsoita maitiro ekugadzira akapfuma midhiya kushambadzira uku uchipa yakaoma seti yezvinhu kubvumidza isingaperi yekugadzira sarudzo. Isu tinotenda ndeye kukunda-kuhwina mhedzisiro yemakambani nevatengi zvakafanana.
Tags: fekitori yekugadziraMuchinjikwa ScreenZvisikwa zvine Simbamitambonzvimbopfungwanharembozhamobile ad studioOutstream Vhidhiyowirirana
Yariv Erel ndiye mubatanidzwa uye CEO we JustAd, yekugadzira tekinoroji kambani inopa izere stack kushambadzira yekugadzira chikuva kune yekugadzira mhedzisiro-inotungamirwa yakapfuma midhiya kushambadzira. Mabhiza ari kutambisa mari uye kuisa mukana wekuisa mukurumbira pane asingashande edhijitari kushambadzira. JustAd's inobata, inodhura-shambadziro inogadzira zvine musoro mushandisi zviitiko.
Kaon AR: B2B Yakawedzera Reality Platform
TeamKeeper: Gadziridza Tarenda Kuchengetedza neManagement Analytics